ကျေးဇူးပြုပြီး ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ (အမြန်ဆုံးလက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါ အရေးကြီးသည်) | ရန်ကုန်သား
February 16, 2009, 8:08 pm Filed under: ရန်ကုန်သတင်း သတိမမူဂူမမြင်
> စကားဦး – ယ္ခုပို့စ် မျှဝေတင်ပြရခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မွေးဖွားကြီးပြင်းကြသော မြန်မာ(ဘာသာမရွေး လူမျိုးမရွေး)လူမျိုးများ၏Human Rights ကို ရည်စူးပါသည်။ ကျတော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည် ဘာသာရေးသည် လူတစ်ယောက်၏ ယုံကြည်ရာ၊ မျိုးစဉ်ဆက်ကိုးကွယ်ရာ၊ နီးစပ်ကြီးပြင်းရာ တို့နှင့် သက်ဆိုင်သောကြောင့် မည်သည့်ဘာသာသည် အကောင်းဆုံးဟု အငြင်းမပွါးလိုပါ၊ လူသားတစ်ယောက်၏ လွတ်လပ်စွာယုံကြည် ကိုးကွယ်နိုင်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် European နိုင်ငံများနှင့် Human Rights ကို တန်ဖိုးထားကျင့်သုံးသော နိုင်ငံများတွင် Freedom of conscience -လွတ်လပ်စွာယုံကြည် ကိုးကွယ်နိုင်ခြင်း ကို လူသားတိုင်း၏ ယုံကြည်မှုအဖြစ် တန်ဖိုးထား ကာကွယ်ပေးထားပါသည်။ ထိုဥပဒေ တစ်ရပ်တည်းနှင့်ပင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နိုင်ငံမှ လူမျိုး ဘာသာမရွေးအား ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံများတွင် ခိုလုံခွင့်များပေး၍ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားသည်မှာ လက်တွေ့ဖြစ်ပါသည်။
> ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ ရိုဟင်ဂျာလှေစီးပြဿနာဖြစ်တဲ့ အချိန်၊
> ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာများမှာ ထိပ်တန်းသတင်း အဖြစ်လူတွေစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ အချိန်၊
> အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ကျမ်းဂန် နှင့် ၎င်းတို့၏တမန်တော်များ အားစော်ကားထားသော အီးမေးများ online တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လှုပ်ရှားလာတဲ့ အချိန်၊
> ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို အခြေခံပြီး အစိုးရ ဘလောက်ဟု ယူစရသော ဘလောက်များတွင် ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေးမှစပြီး အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး အထိရေးသားလာခြင်း၊
> အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအကြား အထင်အမြင်လွှဲမှားစေသော ဆောင်းပါးများ ဆက်တိုက်ဖော်ပြလာခြင်း၊
> ဤသည်တို့ သည်အားလုံးတိုက်ဆိုင်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာတာလား?
> သို့တည်းမဟုတ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ချိန်ကိုက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေတာလား?
> ဒီပြဿနာမဖြစ်ခင် မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ် တို့ ရေပိုင်နက်ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့တာ အခုထိမပြေလည်သေးပါ။
> ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင် တိုင်းရင်းသားမြန်မာမွတ်စလင်မ်များ လည်း အခြားသော ဘာသာဝင်များနှင့်လက်တွဲပြီး ဆရာတော်ကြီးများနှင့် လက်တွဲပါဝင်ခဲ့မှုအား စိုးရိမ်လျက်ရှိသော နအဖအစိုးရအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် သွေးခွဲမှုများပြုလုပ်ရန် plan များနှင့် အစဉ်ကြိုးပမ်း နေချိန်တို့တွင် နောက်ဆုံး သတင်းရရှိချက်အရ နအဖ အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်တွင်း၌ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတခု ဖန်တီးရန်ရှိကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
> အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ကျမ်းဂန် နှင့် ၎င်းတို့၏တမန်တော်များ ကိုစော်ကားထားသော အီးမေးများ၊ ထိုစော်ကားသူ၏ နောက်ထပ်အီးမေးတစောင် တို့အပြင် အစ္စလာမ်ဆန့် ကျင်ရေးဖော်ပြလာသော စစ်အစိုး ရ လိုလားသည့် ဘလောက်ဆောင်းပါးများကိုအောက်ပါ link များတွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်
> padaukmyay.blog (ပိတောက်မြေသည် နေ့စဉ် နံနက်ပိုင်းများမှစတင်က အသံလွှင့်နေသော အသံလွှင်ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။)
> ywetwar.blog (သူကတော့ ဘာသာရေးဆွေးနွေးတဲ့ forum တွေမှာ အစ္စလာမ်အကြောင်းဝေဖန်ရေးသားပြီး အစ္စလာမ် blog အတော်များများမှာ သူ့blog address ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ သူသည် ရုရှနိုင်ငံတွင်ပညာသင်ယူနေသော မြန်မာ့စစ်တပ်မှ စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည်။ )
> (မြန်မာပြည်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ခရစ်ယာန် မွတ်စလင်တို့ဆိုသည်မှာ အနည်းနဲ့အများ ပတ်ပြီး အမျိုး တော်နေကြတာတွေရှိပါတယ်။ မွတ်စလင်တွေဟာ ရှေးမြန်မာဘုရင်တွေလက်ထက် ကတည်းက မြန်မာပြည်မှာ နေထိုင်လာခဲ့သည်၊ ဘုရင်တွေဆီမှာ အမှုတော်ထမ်းခဲ့တာတွေ သမိုင်းမှာရှိပါတယ်၊ ဦးကုလား မဟာရာဇ၀င်တို့၊ မှန်နန်းရာဇ၀င်တို့မှာပါတယ်၊ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်ဝင်တုံးကလည်း ဘုရင့်တပ်ကမွတ်စလင်တွေ ခုခံကာကွယ်ခဲ့ ကြတယ်လို့ဖတ်ဖူးပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာလည်း မွတ်စလင်တွေပါကြတယ်။ မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်း ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေဖို့ စည်း ရုံးရမဲ့အစား သတ်ဖြတ်ဖို့မီးမွေးတာ မကောင်းပါကြောင်း…..)
> ၎င်းစစ်အစိုးရ၏ အာဏာတည်တန့်ရေး၊ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင် စစ်အစိုး မျက်နှာပျက်ခဲ့သည်များကို ပြည်သူများမေ့ပြောက်သွားစေရန် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းများဖြစ်စေရန် တစ်မြေထည်းမွေး မြန်မာပြည်သူအချင်းချင်းကိုသွေးခွဲရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတိုင်း၊ ဘာသာတိုင်းသတိနှင့်နေကြပါရန်…။
> မြန်မာညီအကိုမောင်နှမများ ကိုယ့်သွေး၊ ကိုယ့်အသက်၊ ကိုယ့်မိသားစုနှင့် အိုးအိမ်များမဆုံးရှုံးကြအောင် စစ်အစိုးရ၏ ပရိယာယ်မှမငြိတွယ်စေရန်ှဝေးဝေးရှောင်ကြပါ။
> မြန်မာနိုင်ငံသားများ (ကြက်အချင်းချင်းအိုးမဲသုတ်ပြီခွတ်ခိုင်နေသလို)စစ်အစိုးရ၏အကွက်ထဲသို့မ၀င်မိစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည် ဒီစာလေးကိုသူငယ်ချင်းများထံအမြန်ဆုံး ပြန်လည်မျှဝေပေးစေလိုပါသည်———-
> ယခုနောက်ဆုံးသတင်းရရှိသည်မှာ ၄င်းတို့သည် ယခု အကယ်ဒမီပေးပွဲပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါလူမျိုးရေးအဓိကရုန်းများ ပေါ်ပေါက်လာအောင် ကြံဆောင်ကြမည်။ ပြီးနောက်တွင် ၄င်းတို့အလိုကျ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးရေးကို အဓွန့်ရှည်စေရန် နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားကြမည်။ ဒါကြောင့် အားလုံး သတိရှိကြပါ။ ဘယ်သူခွဲခွဲ တို့မကွဲ အမြဲစည်းလုံးမည် ဆိုသော ဆောင်ပုဒ်ကို ပြည်သူများအားလုံး လက်ကိုင်ထားပြီး တရုတ်အားကိုး ပုစိန်ရိုးဖြစ်နေသော ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့် စစ်အစိုးရကို ပူးပေါင်းဆန့်ကျင်ကြပါ။ (မြန်မာတရုတ်များကို မဆိုလိုပါ)
> တို့ ဗုဒ္ဓဟာ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကိုသာ ပြသခဲ့တယ်။ အစွန်းမရောက်စေဖို့ ဆုံးမခဲ့တယ်။ အားလုံးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းအောင်နေရမယ်။ ဘာသာတရားတွေဟာ တကယ်ကို ငြိမ်းချမ်းကြပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကြောင့် ကမ္ဘာကြီးမှာ ပျော်စရာတွေရှိနေတာ။ အဲဒီပျော်ရွှင်မှုတွေကို သင်တို့ရဲ့ အတ္တတွေနဲ့ အရောင်မဆိုးကြပါနဲ့။ ဘာသာတရားတွေကို စော်ကားတဲ့သူဟာ လူလို့တောင် မသတ်မှတ်သင့်ဘူး။ ဒီလိုကိစ္စတွေကို အများပိုင်းလုပ်ကြတာလဲ တို့ထဲက လူနည်းစုတွေပဲ။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မြန်မာဆိုရင် သိပ်ကိုရှက်ဖို့ကောင်းရတယ်။